Hunhu hwepamusoro 220V 5.5KW nhanho nhatu dzemagetsi ac servo mota
Tags: Hunhu hwepamusoro 220V 5.5KW nhanho nhatu dzemagetsi ac servo mota
IE2 yakatevedzana matatu-chikamu asynchronous motors inosangana neIEC60034-30: 2008 yakajairwa IE2 simba rekuita basa. IE2 yakatevedzana matatu-chikamu asynchronous motors akaiswa zvinoenderana neIEC60034 standard.
Zvimiro: Ivo vane zvakanakira chimiro chinonzwisisika, chitarisiko chakanaka, ruzha rwakaderera, yakakwirira yekudzivirira level uye yakakwirira insulation level. Inogona kushandiswa zvakanyanya mumafeni, pombi, maturusi emuchina, compressors, michina yekufambisa uye zvimwe zvakajairika zvemuchina.
Chishandiso:Idzo dzinogona zvakare kushandiswa mu peturu, makemikari, simbi nesimbi, migodhi nedzimwe nzvimbo dzine hutsinye.
NEMA yakajairwa matatu-chikamu asynchronous mota dzakavharirwa zvachose fan yakatonhorera mota. Iyi nhevedzano mota dzakagadzirwa uye kugadzirwa. Zvinoenderana neUSA NEMA standard. NEMA yakajairwa mota dzine madhizaini mana: A, B, C, D. Kuti isangane nemusika, kambani yedu yakagadzira hunyanzvi hwemhando nhatu dzeasynchronous mota uye yakakwirira yekutanga torque, yakakwirira kutsvedza chiyero matatu-chikamu asynchronous mota sepaNEMA chiyero.
1. Kuenzaniswa ne-single-phase asynchronous motor, matatu-phase asynchronous mota ine kuita zvirinani uye inogona kuchengetedza zvinhu zvakasiyana.
2.Single phase motor inonyanya kukodzera kushandiswa kweimba, nokuti voltage ye single-phase motor ndeye 220 V, 110 v.
3.Three-phase motor inonyanya kukodzera nzvimbo ine-phase-phase power supply, uye voltage inowanzoita 380V, 220V, 400V, nezvimwewo.
1.YC Series Heavy-duty single-phase motor inokodzera madiki maturusi emuchina uye pombi dzemvura, kunyanya kumusangano wemhuri uko chete-chikamu chimwe chete chemagetsi chinowanikwa.
2.Motors yeiyi nhevedzano inosanganiswa neazvino dhizaini, inogadzira neakanakisa emhando zvinhu, ine zvimiro zvekutaridzika-inotaridzika uye inosangana neIEC zviyero.
3.YC series motors ndeye IP44 yakavharirwa zvachose fan-kutonhora mhando, yakatemerwa zvinobuda i3HP kana pazasi, capacitor kutanga, mukati rated voltage uye 50Hz, torque yekutanga inopeta katatu pane yakayerwa torque uye 60Hz iri 2.75times kupfuura, mota. ye4HP kana kupfuura ndeye capacitor kutanga uye kumhanya mhando.
4.Inoisa pfungwa pane zvakanakira yekutanga torque, inomhanya inomhanya, yakaderera tembiricha inokwira, yakaderera ruzha uye yakanyanya kuwandisa kuita.
5.Nhamba yekududza uye mavharuvhu anomiririra zvese zvinoenderana neIEC zviyero.
YX3 Series Motors inotora dhizaini nyowani uye zvemhando yepamusoro zvinhu. Izvo zvinoenderana neIEC60034-1 zviyero. Kushanda kwemamotor kunosangana neIE2 mazinga, zvinoenderana neIEC60034-30 standard.
Vane maficha akanaka: ruzha rwakaderera, kuzunguzika kushoma, kuvimbika, kutaridzika kwakanaka., Iyo yemba ye YE2 yakatevedzana mota inokandwa simbi.
GE WE3 akateedzana mota dzinoshanda zvakanyanya izvo zvinotora shanduko yemhando yepamusoro tekinoroji, kutonga kwemhando uye manejimendi eGE(General Electric Company) .Inosvika muGiredhi 2 simba rekushandisa sezvakarongwa muGB 18613-2012 uye inosangana nezvinodiwa zveIE3 motors muIEC. 60034-30-1.The mounting dimensions inoenderana neIEC zviyero uye GB zviyero zvinofambisa kuiswa nevatengi.
Pamusoro peiyo yekutanga kutaridzika maitiro eWE3, iyo WE3 yakatevedzana zvakare ine chimiro chakakomberedzwa, kurasikirwa kwakaderera, kuderera kweruzha, kuderera kwakadzika, kushanda kwakachengeteka uye kwakavimbika, uye nyore kugadzirisa.
1. Iyo yakakwira tembiricha inodzivirira mota inotora fashoni yealuminium alloy chitarisiko dhizaini uye chitarisiko chakanaka.
2. Motokari inoshandisa mhando dzemhando yepamusoro-chaiyo, girisi yakakosha, ruzha rwakadzika, kudengenyeka kwakaderera, uye hupenyu hurefu hunobereka.
3. Yakakwirira-tech dhizaini inogamuchirwa kudzikisa huwandu hwemagetsi emota uye kuvandudza kushanda kwepamusoro kwemota.
4. Iyo yakakwira tembiricha inodzivirira mota inotora yakakwira tembiricha inodzivirira H-kirasi insulating zvinhu kuti ive nechokwadi chekushanda kwakachengeteka kwemota munzvimbo yakanyanya tembiricha. Hazvizochembera kana kutsva.
5. Kugamuchira advanced thermodynamic yekuongorora nzira yekugadzira dhizaini, uchishandisa yakasarudzika "motor kupisa dissipation" dhizaini, kutyora iyo yechinyakare exhaust-mhando yekupisa kupisa nzira. .
6. Iyo shaft yakagadzirwa ne chrome simbi uye simbi isina tsvina, iyo inogona kugadziriswa maererano nezvinodiwa nevatengi. Iyo shaft inogona kurebeswa uye kupfupikiswa (iyo shaft inogona kusvika 230mm), uye shaft dhayamita inogona kusvika 26mm (1500W yakakwirira tembiricha mota)
7. Motokari yemagetsi: imwe-chikamu 220V, katatu-chikamu 220V / 380V, 2 matanda, mamwe akawanda anogona kugadziriswa.
Inoshandiswa zvakanyanya muSMT reflow soldering michina, wave soldering muchina, bhutsu michina, yekurongedza muchina, kicheni midziyo, tunnel mavira, midziyo yekuyedza, midziyo yeovheni, midziyo yekuputira yakakwirira, nezvimwe.